ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ » အမျိုးသမီးများသည်လိင်ကာလအတွင်းအကြောင်းစဉ်းစားကြည့်ပါဘယ်အ
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: အောက်တိုဘာ. 23 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
လိင်တစ်ဦးအထူးဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ရင်းနှီးသော, In-The-အခိုက်လုပ်ရပ်, တခါတရံတွင်အမျိုးသမီးထု၏စိတ်ထဲတွင်လွှဲလေ့, လိင်သည်မည်မျှကြီးမြတ်နေပါစေ. လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတွင်းအမျိုးသမီးများ၏စိတ်ဝင်စားနိုင်တယ်ဆိုတာအကြံအစည်၏အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေကြသည့်တချို့.
TV မှာ Show / ရုပ်ရှင်များ: သင့်သည်ကြီးမြတ်ရုပ်ရှင်ကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်တီဗွီစီးရီး၏အလယ်တွင်၌ရှိကြ၏ဖြစ်စေ, တစ်ခါတစ်ရံကြံစည်မှုနှင့်အက္ခရာများယင်းတို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်. ကျွန်တော်တစ်ဦးရှိပါကကျနော်တို့ကမကူညီနိုငျ “တစ်ဦး-ha” လိင်၏အလယ်၌အခိုက်အတန်, ဒါကြောင့်ပဲလိင်ဖှယျဖြစ်ပါတယ်ကြောင်းကိုဆိုလိုတယ်.
ညနေစာ: ဒါပေမဲ့, သင်သူမ၏အလုပ်ကိုတနေ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုမှအဖြစ်မကြာမီသူအိမ်တံခါးရှေ့အထဲသို့ဝင်သောသူမ၏ခြေပယ်သင့်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လှည်းဖြစ်သွားလျှင်သင်သူမ၏အတွင်းနေစဉ်သူမကညစာစားစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်နေကြတယ်. ကျွန်တော်တို့ multitasking နိုင်လျှင်ကျနော်တို့ကမကူညီနိုငျ, ပေါင်းရဲ့ရိုးသားပါစေသတည်း, လိင်အများအားဖြင့်ဝမ်းကိုတက်အလုပ်လုပ်လုပ်လိုသောဘယ်သို့ဖြစ်သည်ကိုသိလောက်ပိုမြန်ကြောင်းညစာစားအဆင်သင့်အထောက်အကူဖြစ်စေလိမ့်မယ်.
ရာထူးပြောင်းခြင်း: ကရင်ဆိုင်ရမယ့်ကြစို့, တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကျွန်ုပ်တို့အတူမိတ်ဖက်အဖွဲ့များရဲ့ off-တစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း. တဦးတည်းလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အခြားထက် ပို. ပျော်မွေ့သောအခါအထူးသဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားင်. အမျိုးသမီးတွေအတွက်အရမ်းတယောက်အနေအထားသို့မိမိတို့၏ယောက်ျားတွေမြင်သောအခါ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပျော်အပါးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူကို cum အောင်ထံမှလာကတည်းကသူတို့တစ်တွေအသစ်တစ်ဦးအကြံပြုမည်မဟုတ်. ဒီဖြစ်ပေါ်နေသောအချိန်, အကြံ “သူကပြောင်းလဲမှုကိုဤရာထူးသို့လည်းဖြစ်ပါသည်. ကိုယ့်အဖြစ်အများကြီးဖြစ်တော်မူသည်အဖြစ်သို့ဖြစ်ရဟန်ဆောင်ပြီးရှိသည်”, “အဘယ်ကြောင့်ငါတို့သည်တလုံးတအသစ်အနေအထားကိုကျနော်တို့ကြိုးစားခဲ့နှင့်ချစ်ကြောင်းကိုလုပ်ဆောင်နေတာကြသည်မဟုတ်?”, နှင့် / သို့မဟုတ် “ပစ်ခတ်, အဘယ်ကြောင့်ဒီအနေအထားကိုထိခိုက်နာကျင်ပါဘူး?” ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်ကိုသို့ pop.
နယူးရာထူးနေရာများကို: အိပ်ရာထဲမှာတက် switching အမြဲတမ်းကောင်းသောစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်နေစဉ်, အားလုံးကရာထူးသူတို့ပုံရသည်ကဲ့သို့လွယ်. ပျော်ရွှင်စရာနှင့်ရယ်မောဖို့အရေးကြီးဖြစ်သည်, ရာထူး့အလုပ်အရမ်းမထင်ကြဘူးအထူးသဖြင့်လာသောအခါ. မှ “သူကမှားယွင်းပြီးမတော်တဆတွင်း၌ကချော်” သို့ “ကျွန်တော်တို့တစ်ဦးပြုတ်ကျခြင်းမရှိဘဲ lube ရောက်ရှိနိုင်” သို့ “ကျနော်တို့ဒီလိုမျိုးမှာသွားစောင့်ရှောက်လျှင်, ငါသည် fart ထင်”, အလားအလာကောင်းသည့်အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ကိုတဆင့်သွားနိုင်ပါတယ်သမျှသောအကြံအစည်.
ခံစားရတဲ့ orgasms: Ladies, ငါတို့ရှိသမျှသည်တစ်ချိန်ချိန်တွင်ငါတို့သည်ငါတို့၏လူရှေ့မှာ cum ကိုသိရ. ဤတစ်မကြာခဏဖြစ်ပျက်မှုမဖြစ်စေခြင်းငှါ, နေစဉ်, ဒါကြောင့်အချိန်ဖြစ်ပျက်ပါဘူး. ထိုအစဉ်, ငါတို့အော်ဂဇင်ပြီးနောက်, လိင်အံ့သြဖွယ်ခံစားရ, ငါတို့သည်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်စိတ်ကိုနူးညွတ်စေလို. အမျိုးသမီးတွေစဉ်းစားသောအခါယင်းအချိန်လေးတွင်ဖြစ်သည် “ကျနော်ကျယ်ကျယ်ညည်းတွားရဆိုရင်, ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ကို cum ကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟု”.
အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များ: သူတို့မိသားစုကိုအလွန်အထူးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သကဲ့သို့ငါတို့ရှိသမျှသည်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များအားချစ်မြတ်နိုး. ဒါကြောင့်ငါတို့ meows အဖြစ်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်တံခါးကိုဖွင့်ထားရန်လေ့, ခှေးဟောငျ, နှင့်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ်တံခါးနားမှာကုပ်ခြစ်ခြင်းစိတ်ဓါတ်များအနှောက်အယှက်နိုင်. သို့သော်, ဤရွေးချယ်မှုကသင့် furry မိတ်ဆွေ watch စေခြင်းငှါဖိတ်ကြားချက်အရသင်လိင်ဆက်ဆံလာနှင့်အတူ. ကျွန်တော်သူတို့မျက်စိသည်ကိုဖမ်းတဲ့အခါကျွန်တော်ထင်သောကြောင့် “ငါကြည့်ငါ့အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နဲ့လိင်ဆက်ဆံလို့မရဘူး” သို့မဟုတ် “အဘယ်ကြောင့်သူ / သူမကျွန်တော်တို့ကိုပိုမိုနီးကပ်စွာဆက်လက်ရွေ့လျား? ကျနော်တို့လိင်ပြတ်တောက်ရချင်ကြဘူး”.
ကြောက်ရွံ့ခြင်းမ, အဲဒီအကြံအစည်အမျိုးသမီးရဲ့စိတ်ကိုဖြတ်သန်းသွားသကဲ့သို့လူတို့, လိင်နေဆဲအရမ်းပျော်စရာဖြစ်. နှင့်အမျိုးသမီး, သင်လိင်ဆက်ဆံနေစဉ် Multi-ထင်နေသောတဦးတည်းသာမဟုတ်အဖြစ်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ.
သင်၏ထွနောက်သို့ Get ငါးနည်းလမ်းများ.
သင်၏နေ့စွဲအထင်ကြီး – အောင်မြင်မှုကိုဝတ်စားဆင်ယင်